EXCEL ကိုအတွက်ဆဲလ်တွေပေါင်းစည်း - EXCEL ကို - 2019
လောလောဆယ်အားလုံးနီးပါးက browser ကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များကိုသွားနိုင်သည့်အားဖြင့် mode ကိုအများရှိသော်လည်း, သမိုင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခံရဖို့သူတို့ရဲ့အလည်အပတ်ခရီး ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဤသင်တန်း၏, အသုံးဝင်သောပေမယ့်ပံ့ပိုးပေးစနစ်စီမံခန့်ခွဲသူနှင့်အခြား "အဆင့်မြင့်" အာဏာပိုင်များကွန်ရက်ပေါ်တွင်လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူလုံးဝအမည်မသိဆက်လက်ရှိနေရန်လိုလားနေလျှင် Tor Browser ကိုတရာ, အထူးအစီအစဉ်များ၏အားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသုံးပြုသူများသည်အကြားရေပန်းစားမှုရဖို့ရန်ပျက်ကွက်နေသောကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ဟာတိုတောင်းသောအချိန်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ browser ကိုပြုလုပ်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အများကြီး features တွေရှိပါတယ်။
analog Tor Browser ကို
Tor Browser ကိုအတွက်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုမှားယွင်းနေ
လုံးဝကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ Tor Browser ကို Remove
မိမိတို့အဘို့ကို Tor Browser ကို Configuring
သငျ့လျြောသောအသုံးပြုမှုကို Tor Browser ကို
ကွန်နက်ရှင်ကို Select လုပ်ပါ
အစအဦး၌, အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို browser ကနေတဆင့်ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မည်သို့မည်ပုံရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး, ဒါကြောင့်ထွက်ဆိုသည်မှာ proxy server များမှတဆင့်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် set up ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
developer က Settings
အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်, program ကိုသငျသညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတ tools များ၏အကူအညီဖြင့်မိမိတို့အဘို့ကို browser ကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ က Developer Console သို့သွားကြဖို့ဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်အဆင်များထဲမှာ, စာမျက်နှာ၏အစီအစဉ်သည်ကုဒ်၏စတိုင်လ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. ပြောင်းပေးပါ။
မဟုတ်ရင်ကပရိုဂရမ် settings ကိုဆင်းရောက်စေဖို့ဖြစ်နိုင်, သာမှုအပြည့်အဝအသိပညာနှင့်အတူကုန်ကျဒါကြောင့်သင်က reinstall ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒီနေရာကိုသွားပါ။
ကွန်ယက်၏ပြီးပြည့်စုံသောအမည်မဖော်နေသော်လည်းအသုံးပြုသူနေဆဲသင့်ရဲ့ browsing history နှင့် bookmark ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါသမိုင်းအလုပ်ပြီးစီးပြီးနောက်ဖျက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့လို့မရပါဘူး။
ကိရိယာ၏လူကြိုက်များထပ်တူ Tor Browser ကိုအစီအစဉ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူသည်သင့်ကိရိယာများအားလုံးတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နှင့် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးအတူတူ tabs များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စာမကျြနှာကို Save နှင့် print ထုတ်
မည်သည့်အချိန်တွင်, အသုံးပြုသူဆက်စပ် menu ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးစာမျက်နှာသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းက print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ feature အားလုံး browser များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အလွန်ကိုမကြာခဏပြုလုပ်အသုံးဝင်သည်, အစဉ်မပြတ်သင်၏အစာညှပ်များကိုရန်စာမျက်နှာကိုကယ်တင်ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအားလုံးအတူတူပင်သတိပြုရကျိုးနပ်သည်။
အဘယ်သူမျှမ browser ကိုကွန်ရက်၏ကြီးမားသောအာကာသအားလုံးခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည့်စုံကာကွယ်မှုဝါကြွားလို့မရပါဘူး။ သို့သော် Tor Browser ကိုအသုံးပြုသူများကလုံခြုံရေး function ကိုရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုကယ်ဖို့ကူညီပေးသည်။ အသုံးပြုသူလိုချင်သောအဆငျ့ရှေးခယျြနိုငျ, နှင့်ပရိုဂရမ်အားလုံးပြောပြကြောင့်ပြုလိမ့်မည်။
ရုရှား interface နဲ့သာယာသောဒီဇိုင်း။
ထို program code တွေပြောင်းလဲသူတို့ကိုယ်သူတို့ထိုသို့စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်တယ်။
စနစ်စုံလင်သောမဖွစျနိုငျသောကွောငျ့အချို့လုံခြုံရေးပြဿနာများရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ, စကားဝှက်နှင့်အခြားအမှုအရာလည်းမရှိသောကွောငျ့သို့သော်ဤဘရောက်ဇာကိုတဆင့်ဒီပြဿနာတွေကိုဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောမရှိကြပေ။
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့အမည်ဝှက်ပိုက်ကွန်ကိုရယူရန်ချင်လျှင်, အသငျသညျအံ့ဩစရာမရှိအများအပြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သာမန်အသုံးပြုသူများအမြင့်မားအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါပြီ Tor Browser ကိုအစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြသငျ့သညျ, သတိရသင့်တယ်။
Tor Browser ကိုအခမဲ့ Download
analog Tor Browser ကို သငျ့လျြောသောအသုံးပြုမှုကို Tor Browser ကို UC Browser ကို kometa browser ကို
Tor Browser ကို - လူကြိုက်များတဲ့ Chromium ကနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. သော, အကြောက်လွန်ရောဂါများအတွက်အစွမ်းထက်က်ဘ်ဘရောက်ဇာကို။ ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်ရှိနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်အမည်မသိ surfing နိုင်စွမ်းပေးပါသည်။
အမျိုးအစား: Windows အတွက်ဘရောက်စာများ
ရေးသားသူ: Torch မီဒီယာ Inc က
Size: 75 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: The Beginner's Guide to Excel - Excel Basics Tutorial (စက်တင်ဘာလ 2019).